देशका १८ जिल्लामा एक हजार भन्दा बढी सङ्क्रमित | Kendrabindu Nepal Online News
३० भाद्र २०७७, मंगलवार ०७:३४
इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार एक हजार भन्दा बढी सङ्क्रमित हुने जिल्ला उपत्यकासहित १८ वटा छन् । काठमाडौं जिल्लापछि पर्सामा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित देखिएका छन् । पर्सामा दुई हजार ५४४, सर्लाहीमा दुई हजार २७९, मोरङमा दुई हजार २६७, रौतहटमा दुई हजार ९, कैलालीमा एक हजार ९९०, धनुषामा एक हजार ९०३ र रुपन्देहीमा एक हजार ७८४ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ ।
उपत्यकामा १२ हजार २४८ सङ्क्रमित
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र हालसम्म कोरोना भाइरस (कोभिड १९) सङ्क्रमितको सङख्या १२ हजार पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले काठमाडौं उपत्यकामा हालसम्म १२ हजार २४८ जनामा सङ्क्रमण देखिएको बताए।
देशभरमा अहिलेसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५५ हजार ३२९ पुगेको छ । ती मध्ये १० हजार सङ्क्रमित काठमाडौ जिल्लाका रहेका छन् । काठमाडौं जिल्लामा महिला तीन हजार ३०२ र पुरुष छ हजार ७२४ जना रहेका छन् । यस्तै ललितपुरमा एक हजार १९१ जनामा ५४१ महिला र ६५० पुरुष तथा भक्तपुरमा एक हजार ३१ जना सङ्क्रमितमा ४२८ जना महिला र ६०३ पुरुष छन् ।
पछिल्लो पटक बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो । अहिले दैनिक ४०० को हाराहारीमा उपत्यकामा सङ्क्रमित बढ्न थालेका छन् । सोमबार मात्र उपत्यकामा ५१२ जना सङ्क्रमित फेला परेका छन् । काठमाडौंमा ४८०, भक्तपुरमा ४३ र ललितपुरमा २९ जना सङक्रमित फेला परेका हुन् ।
Prevप्रदेश नं. १ मा ८७ नयाँ सङ्क्रमित थपिए
‘चुनावलाई केन्द्रमा राखेर काम थाल्नुस्’ : अध्यक्ष थापाNext